China RCL-911 Fitaovana LED Linear Light nitaingina etsy ambany | lafo vidy
Jiro LED tariby miverina miverina
Jiro tariby LED nitaingina ambany
Jiro jiro tariby LED eo aloha
RCL-4502 Hazavana Linear LED eo anoloana
RCL-2620 hazavana LED tariby tafaverina miverina
RCL-2118 hazavana LED tariby tafaverina miverina
RCL-911 Fitaovana hazavana LED ambany nitaingina ambany
Mombamomba ny rec Aluminium
Amin'ny fonony mazava na opal (translucent)
Ohatra fampiasana: sisin'ny fanaka
3000k fotsy mafana
4200k fotsy tsy miandany
Fotsy mangatsiatsiaka 6000k
Sarony PC, base aluminium
Max halavany misy amin'ny 3m
visy sy satroka
Black, Amumilum, Gray Metal, Champion)
MOQ ambany, ny vidiny dia azo ifampiraharahana ihany koa arakaraka ny habetsahana. Matetika alefan'ny DHL, UPS, FedEx na TNT izahay. Matetika dia maharitra 3-5 andro vao tonga. Tsy voatery koa ny sidina an'habakabaka sy an-dranomasina. Voalohany, ampahafantaro anay ny zavatra takinao na ny fampiharana anao.
Faharoa, manonona izahay araka ny takinao na ny soso-kevitray.
Fahatelo, ny mpanjifa dia manamarina ireo santionany sy toerana apetraka ho an'ny filaminana ara-dalàna.
Fahefatra, mandamina ny famokarana izahay.
Aesthetics-Raha zava-dehibe aminao ny fisehoana dia manome vokatra mahery vaika ny LED Linear. Manome fahaizana be dia be amin'ny famoronana endrika tsy manam-paharoa sy mahasarika ny maso. Ny zoro, ny fiolahana ary ny firakotra miloko namboarina ho oxidized dia safidy vitsivitsy fotsiny izay mahatonga ny LED Linear ho safidy mora foana.
F: Afaka manome santionany ve ianao?
A: Eny, afaka manome santionany izahay maimaim-poana, ary entinao ianao ny vidin'ny fandefasana.
Fanontaniana: Azontsika atao ve ny manamboatra ny jiro ilaintsika
A: Eny, azafady mba lazao aminay amin'ny antsipiriany ny zavatra takian'ny jiro tsipika, na ny sary. Anisan'izany ny isan'ny vakana fanaovan-jiro ampiasaina, misafidy hazavana voajanahary, hazavana mafana na hazavana mangatsiaka. Hanome anao vahaolana tena mety izahay.
F: Misy fatra kely indrindra ve ao amin'ny baiko iray?
A: MOQ ambany, ny vidiny dia azo ifampiraharahana ihany koa arakaraka ny habetsanao.
Omeo fahombiazana avo, fiainana lava sy fitsitsiana angovo ho an'ny tanjona ankapobeny. Ny jiro alimo alimo an'ny Aluminium dia manome anao jiro mazava kokoa sy mora vidy ary mahasalama kokoa noho ny jiro mandrehitra sy fluorescent. Tsy ny mazava ihany, fa ny endrika ivelany ihany koa. Izy io no solon'ny fitsinjarana angovo tonga lafatra amin'ny fanavaozana sy ny fananganana vaovao amin'ny filàna trano sy ara-barotra.
Teo aloha: RCL-0810 Fitaovana hazavana LED ambany nitaingina ambany
Manaraka: RCL-2318 Fahazavana an-jorony LED hazavana ambany
Jiro hazavana miafina
Taratra hazavana tarihiny
Fitaovana hazavana Linear
Taratra tariby tariby
Vahaolana tariby tariby Linear
Tariby tariby taratra tarihin'ny Linear
Rafitra jiro tariby tariby
Hazavana tarihin'ny làlam-pahazavana noterena
RCL-2318 Fahazavana an-jorony LED hazavana ambany
RCL-0810 Fitaovana hazavana LED ambany nitaingina ambany
Ampidiro ny adiresy mailakao raha te hanana ny vaovao farany momba ny Metal sy ny hetsika.